Memfisy - Wikipedia
I Memfisy dia renivohitr'i Ejipta tamin'ny Andro Taloha izay miorina ao am-tampon'ny vinanin'i Nily, eo amin'ny 30 km latsaka ao atsimon'i Kairo ankehitriny. Amin'y teny arabo dia atao hoe مَنْف‎ / Manf, ary amin'ny teny grika hoe Μέμφις / Memfis io tanàna io. Ny sisam-paharavany dia hita ao akaikin'ny tanànan'i Mit-Rahineh sy i Helwan, ao atsimon'i Kairo.
Sisam-paharavan'ny tanànan'i Memfisy: ireo andry naorina tamin'ny andron'i Ramsesy II.
Tamin'ny taonarivo faha-4 tal. J.K dia nampanamboatra manda fiarovana teo amin'ny toerana iorenan'i Memfisy ny mpanjakan'i Ejipta (izay mety ho i Menesy mpanorina ny dinastia voalohany), izay nantsoina hoe Ineb Hedj ("rindrina fotsy"). Tao no toeram-ponenan'ny faraôna tao amin'ny Empira Voalohany (teo anelanelan'ny taona 2649 sy 2152 tal. J.K.) ka niroborobo io tanàna io nandritra izany vanimpotoana izany. Nanorina ny piramida manodidina an'i Memfisy ireo faraôna, ka voaorina tamin'izany ny piramidan'i Sakarà (Sakkarah), ny an'i Meidoma (Meidum), ny an'i Dasora (Dahshur) ary ny an'i Gizà (Giza).
Tamin'ny fiafaran'ny Empira Voalohany dia nietry voninahitra i Memfisy ka i Tebay indray no lasa renivohitra. Na dia izany aza dia nitana anjara asa lehibe i Memfisy satria nijanona ho renivohitra ara-panjakana sady toeram-ponenana tian'ny faraôna indrindra. Tamin'ny taona 525 tal. J.K. dia nanjary toeram-ponenan'ny solom-panjaka (na strapa) persiana i Memfisy. Tamin'ny andron'ny dinastia ptôlemaika sy tamin'ny vanimpotoan'ny Empira rômana dia izy no tanàna faharoa tao Ejipta ao aorian'ny Aleksandria. Nitontongana ny lazan'i Memfisy tamin'ny taonjato faha-7 taor. J.K. sady natao toeram-pitrandrahana vato hanaovana ny fanorenana ny tanànan'i Fostata (al-Fustat ) izay antsoina hoe Kairo ankehitriny.
Teo amin'ny toerana nirorenan'i Memfisy no nahitan'ny arkeôlôga ny tempolin'ny andriamanitra Pta sy Isisy ary i Ra, sy sarivongana goavana roa an'i Ramsesy II, sy sfinksa vita amin'ny albastara ary toeram-ponenana maro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Memfisy&oldid=1000585"
Dernière modification le 21 Janoary 2021, à 11:06
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2021 amin'ny 11:06 ity pejy ity.